Soo dejisan Private Internet Access 82 – Vessoft
WindowsShabakadVPN iyo WakiilPrivate Internet Access
Bogga rasmiga ah: Private Internet Access
Isticmaalka Internetka ee Gaarka ah – software si loo ilaaliyo xogta isticmaalaha internetka iyo helitaanka shabakadaha internetka ee la xiray. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xulato dalka iyo nooca xiriirka ee shabakadda internetka. Isticmaalka Internetka ee gaarka loo leeyahay wuxuu bixiyaa ilaalinta xisadaha VPN adoo codsanaya oo xaqiijinaya xogta ku xiran kororka heerka ilaalinta, haddii amar dheeraad ah loo baahan yahay. Khadka Internetka ee gaarka loo leeyahay wuxuu ka kooban yahay goobo horumarineed oo si toos ah loogu xiro internetka haddii ay dhacdo xirmidda VPN, ka hortagga DNS iyo IPv66, xayeysiiska xayeysiinta iyo barnaamijyada raadraaca, dekedda hore, iyo iwm. siyaasadda shaqo siiya iyada oo aan tixgelineynin diiwaangelinta iyo diiwaangelinta waxqabadka isticmaalka, kaas oo xaqiijinaya in aan la xaqiijin falalka internetka.
Xajmiga aan xadidneyn
Xulo astaanta sirta
Taageero loogu talagalay fureyaasha OpenVPN, PPTP iyo L2TP
Ku shaqee adiga oo aan xisaabin xisaabaadka hawlgalka
Taageero loogu talagalay P2P
العربية, English, Français, Español (de México)...
Soo dejisan Private Internet Access
Faallo ku saabsan Private Internet Access
Private Internet Access Xirfadaha la xiriira